alanlaymyar – Page2– Online Book store
ဇန်နဝါရီလ ၅ ရက်နေ့ ၊ စနေနေ့ ဖြစ်သည်..။ သည်နေ့သည်ရက်ဟာ အခြားသူတွေ အတွက်တော့ ထူးခြားမည် မဟုတ်သော်လည်း ကိုခင်ကျော်နှင့် မအေးအေးဝင်းတို့အတွက်တော့ ထူးခြားသည့်နေ့ ရက် တစ်ရက် ဖြစ်သည်..။ သူတို့နှစ်ယောက် အိမ်ထောင်ကျသည်မှာ နှစ် နှစ်ကျော်သာ ရှိသေးသည်..။ ချစ်လို့ ခင်လို့ ချလို့ လိုးလို့ မဝသေးပဲ ကောင်းတုန်း…။ ဒါပေမယ့် သူတို့ လင်မယားနှစ်ယောက် ချစ်တင်းနှီးနှော ကာမစပ်ယှက်ကြရသည့် အချိန်များက နည်းပါးလှသည်..။ ဒါကလည်း ကျန်းမာရေ ချို့တဲ့နေကြလို့ မဟုတ်..။ သူတို့၏ ကြီးပွားရေး စီးပွားရေး လုပ်ငန်းများကြောင့် ဖြစ်သည်..။ အေးအေးဝင်းသည် အင်ဂျင်နီယာဘွဲ့ရ တစ်ယောက်ဖြစ်ကာ အစိုးရဌာနတစ်ခုတွင် အရာရှိမ တစ်ယောက်အဖြစ် အလုပ် လုပ်ကိုင်နေသည်..။ ခင်မောင်ကျော်ကတော့ အစိုးရ အလုပ်မလုပ်..။ […]
“လှလှ” (စ/ဆုံး) လှလှတို့ ကုမ္ပဏီ က မန်နေဂျာ လူပျိုသိုးကြီး တယောက်က လှလှကို ရစ်နေသည်၊ လှလှ က သူခလေးတယောက်အမေလို့ ပြောတာကိုတောင် မယုံဘူး လုပ်နေသည်၊ ဘယ်လိုမှ မဖြစ်နိူင်ဘူး၊ ဒါအအို ဘော်ဒီလား၊ ဒီလောက်ငယ်ငယ်လေးနဲ့ အိမ်ထောင်နဲ့ ခလေးနဲ့ ဆိုတာ သူ့ကို လက်ရှောင်စေခြင်လို့ ညာနေတာဆိုပြီး ပြောလေ့ရှိသည်။ လှလှ အနေနူင့် သူယုံကြည် စေရန်သက်သေပြ၍ ရနိူင်သော်လည်း သူမ အနေနဲ့ လည်းကျေနပ် ပီတိ ဖြစ်သည်က တကြောင်း၊ သူမတက်လမ်းကလည်း ထိုမန်နေဂျာကြီးပေါ် မူတည်နေတာကလည်း တကြောင်း ဆိုတော့ ဘာဂလိုလို ၊ဘိုဂလာတာတာ လုပ်၌ထားထားသည်။ ထိုမန်နေဂျာ ကိုဖုတ်ကြောင် (နံမည်ရင်းတော့ မဟုတ်ပါ၊ သူ့နောက်ကွယ်မှာ သူများတွေခေါ်သော နံမည်ဖြစ်သည်၊) ကလည်း […]
Posted on November 5, 2019 Author alanlaymyar	Comment(0)
ဒေဝီစံအိမ်​ကြီးနှင့်​ ​မောင်​ပီယတို့ သားအဖ ( စဆုံး )
ဒေဝီစံအိမ်​ကြီးနှင့်​ ​မောင်​ပီယတို့ သားအဖ ( စဆုံး ) =================== စာရေးဆရာအား Credit “သူကြီး သူကြီး” ဝေ့ ဘာလဲကွ” “ညက ရွာတောင်ပိုင်းက ဖိုးထောင်အရက်မူးပြီး ဒေဝီစံအိမ်ထဲဝင်သွားတာ…အခု…မနက်စံအိမ်ရှေ့မှာသူ့အလောင်းတွေ့ရလို့ ….သူကြီးလာခေါ်တာ´´ သူကြီးလည်း လက်စွဲတော်နှစ်လုံပြူးသေနတ်ကိုဆွဲယူရင်း ရွာသားတွေနှင့်ဒေဝီစံအိမ်ရှေ့ရောက်လာလေ၏။ “ဒေဝီမရဏစံအိမ်ကြီး”ကလူမနေတာကြာပြီဖြစ်၍ ခြုံနွယ်များဖုံးအုပ်နေ၏ ထိုစံအိမ်ကြီးအတွင်းကိုတရွာလုံးအပြင်မည်သူတဦးတယောက်မျှ ဝင်ရောက်ခြင်းမပြုဝံ့ကြပေ။ အကြောင်းမှာ ဂျပန်ခေတ်ကထိုအိမ်ကြီးရဲ့အရှင်သခင်မ သားအမိနှစ်ယောက်မှာ အဆိပ်သောက်ကာ အဆုံးစီရင်သွားခြင်းဖြစ်ပေသည်။ ဒေါ်နန်းဒေဝီမှာ အသက်၄၀အရွယ်မုဆိုးမတဦးဖြစ်ပြီး အသက်၂၀အရွယ်နန်းကေသီဆိုတဲ့ချောမောလှပသောသမီးလေးတဦးရှိခဲ့၏ ။ အသက်၄၀ဆိုပေမယ့် ဒေါ်နန်းဒေဝီမှာမုဆိုးမဖြစ်လင့်ကစား ချောမောလှပပြီးတောင့်တင်းတဲ့ခန္ဓာကိုယ်အလှကို ပိုင်ဆိုင်ထားသူ မင်းမျိုးမင်းနွယ်မှဆင်းသက်လာသူဖြစ်ပြီး သမီးနန်းကေသီ မှာလည်း မအေတူသမီးပီပီ အသက်၂၀အရွယ်နှင့်မလိုက် အောင်ဆူဖြိုးသောရင်နှစ်မွှာစွင့်ကားသောတင်သားစိုင်တွေနှင့်ထိုခေတ်ထိုအခါကပင် ၎င်းတို့သားအမိနှစ်ဦးမှာ မြင်သူ ရှုမငြီးအလှပိုင်ရှင်များဖြစ်ကြတော့သည်။ ဂျပန်စစ်တပ်သည်ထိုတောရွာကလေးကိုရောက်ရှိလာချိန်မှာတော့ ဒေါ်နန်းဒေဝီတို့ သားအမိ ကံဆိုးဖို့ဖြစ်လာလေ၏။ ရွာသူကြီးအိမ်တွင်တည်းခိုသောဂျပန်စစ်တပ်ရဲ့စစ်ဗိုလ်ကမိမိစစ်သားများအား ဧည့်ခံပေးရန်ရွာထဲရှိ မိန်းမမှန်သမျှအားခေါ်ခိုင်းစေ၏။ သူကြီးလည်းအခက်တွေ့ကာရွာသားများနှင့်တိုင်ပင်ဆွေးနွေးရာမှ […]
👉🏻 တက်လူ 👈🏻 ( စ / ဆုံး ) ========== ရေးသားသူ ( ချမ်းမြေ့သာဇံ မောင်မောင်နှံ ) နှုတ်ဆော့မိမှတော့ မထူးတော့ပေ။ သူကလည်း စိန်ခေါ်ပြီလေ။ ဒီတော့ ဘွာခတ်နေလို့ ညံ့ရာကျသွားမှာပေါ့။ ဤသို့ပင် ‘တက်လူ’ ဆုံးဖြတ်လိုက်သည်။ သွေးက စကားပြောလာသည်။ သွေးဆိုတာက လူပျိုသွေး။ တက်လူအသက်က ၁၆ နှစ်ကျော်လာပြီ။ ဆန့်ကျင်ဘက်မိန်းမတွေရဲ့ အဓိကပစ်မှတ်တွေကို အငမ်းမရ ကြည့်တတ်လာပြီ။ ပြီးတော့ အသံတွေပြောင်းလာသည်။ နှုတ်ခမ်းမွှေးနုနုလေးတွေ ခပ်ရေးရေးပေါက်လာပြီ။ ‘မာစတာဘေးရှင်း’ ခေါ် ဂွင်းတိုက်တတ်လာပြီ။ အားလုံးခြုံလိုက်လျှင် တက်လူတစ်ယောက် ကလေးမဟုတ်တော့ပဲ လူပျိုဖြစ်လာပြီ။ ကြီးကောင်ဝင်လာပြီဟု ပြောရပေတော့မည် ။ @ @ @ မနက်ပိုင်းက သူ့အမေကို မြစ်ဆိပ်သို့ […]
ဆရာမခြောက်ယောက် ကိုယ်တစ်ယောက် ………………(အပြာစာအုပ်​သစ်​) ဆရာမများဖြစ်သည့် နီလာ၊ ချယ်ရီ၊ စနိုး၊ သက်သက်ဇော်၊ ငြိမ်းနှင့် အိအိဇံတို့သည် ဂွင်ကောင်းး၍ ချောင်ကျသော ချယ်ရီအိမ်ကို ရွေးချယ်လိုက်သည်။ သူမတို့မှာ နေ့စံ ညခံနတ်သမီးလေးတွေ ဖြစ်နေကြရသည်။ ညပိုင်းရောက်လျှင် ထွန်းထွန်း အမိန့်အတိုင်းကို လိုက်နာကြရသည်။ မဟုတ်ပါက လွန်ခဲ့သောလက ထွန်းထွန်းတစ်ယောက် သူမတို့ကို စိတ်ဆိုးကာ မခိုင်အိမ်တွင် သွားအိပ်နေသည်။ သူမတို့မှာ ဆာလိုက်သည် ဖြစ်ချင်။ တစ်ယောက် အဖုတ် တစ်ယောက် ပွတ်ပေး လျက်ပေးလည်း လီးလောက် အရသာ မရှိ။ ထို့ကြောင့် ထွန်းထွန်းက သေဆိုသေ ရှင်ဆိုရှင် ဘဝကို ရောက်ခဲ့ရသည်။ “ဒီတစ်ပတ် ညတိုင်း ဆရာမဝတ်စုံ အပြည့်အစုံ ဝတ်လာကြ” သူမတို့ တစ်ယောက်မျက်နှာ တစ်ယောက်ကြည့်ရင်း ခေါင်းညိတ်ကြသည်။ […]
ကြိုက်သလိုသုံးကြ ကျမဘဝ ( စ / ဆုံး )
#နွယ်နွယ်ဝင်းရဲ့ဆန်းထူးနဲ့ဘစီcrd **** ကြိုက်သလိုသုံးကြ ကျမဘဝ **** ( စ / ဆုံး ) ==================== ( Littlepixiedust ) ကျမနာမည်က နွယ်နွယ်ဝင်း.. နွယ် လို့ပဲအတိုခေါက်ခေါ်ကြတယ်။ အသက်က ၂၄ ထဲမှာပေါ့.. အိမ်ထောင်ကျတာ ၃ နှစ်လောက်ရှိပါပြီ။ ယောက်ကျားက ကိုဆန်းထူးတဲ့။ ကားပွဲစားလုပ်တဲ့သူပါပဲ။ ဆက်မပြောခင် ကျမရဲ့ ခန္တာကိုယ်အစိတ်အပိုင်းတွေအကြောင်း အကြမ်းဖျဉ်းပြောပြမယ်။ ကျမက အသားအရမ်းမဖြူပေမဲ့ ဝင်းတဲ့အထဲမှာပါတယ်။ ခြေသလုံးတွေ ပေါင်တန်တွေနဲ့ တခြားအတွင်းသားတွေက တရုတ်မတွေလို မဖြူပေမဲ့ဝင်းဝါပြီး ဆွဲဆောင်အားကောင်းတဲ့အထဲမှာပါတယ်။ နောက် ကျမရဲ့နို့လေးတွေက အိမ်ထောင်မကျခင်က အတော်ပြားပြီးသေးတဲ့အထဲမှာပါပေမဲ့နောက်ပိုင်း ကိုဆန်းထူးက လိုးကာနီးတိုင်း နို့တွေကို အသေညှစ်လွန်းတော့ အိမ်ထောင်သက် ၃ နှစ်အတွက် ဆူပြီးမို့လာလိုက်တာ အခုဆိုကိုဆန်းထူးရဲ့ ယောက်ကျားလက်ဝါးနဲ့တောင် ပြည့်ချင်သလိုလိုဖြစ်နေပြီ။ […]
” ကျောင်းပိတ်ရက်တိုင်း သတိရနေမှာပါ(စ/ဆုံး) 🌴🌴🌴🌴🌴🌴🌴🌴🌴🌴 ” အ … အမေ့ … ကိုမင်းနိုင် … ဖြည်းဖြည်း လုပ်ပါရှင် … အဟင့် ဟင့် ” ဒေါ်စန္ဒာကျော် တယောက် သူမတို့ လင်မယား အိပ်သော ကုတင်ပေါ်တွင် လေးဖက်ထောက်ကာ ဖင်ဘူးတောင်း ထောင်ပေးထားရ၏။ ကော့ထွက် ဝိုင်းစက်နေသော ဖင်သားစိုင် ဖွေးဖွေး ၂ခြမ်းကြား စောက်ပတ်မှာ ဖေါင်းကြွ ထွက်နေ ပြန်သည်။ ဦးမင်းနိုင်မှာ ဒေါ်စန္ဒာကျော်၏ ခါးလေး အား လက်နှစ်ဘက်ဖြင့် စုံကိုင်ကာ ဆွဲလိုးနေ၏။ ဦးမင်းနိုင် လီးကြီး သူမအဖုတ်ထဲ တိုးဝင်လာတိုင်း စောက်ခေါင်း အတွင်းသားများက အလိုလျောက် ညှစ်ပေး မိနေပြန်၏။ လင်တော်မောင်၏ ကျောင်းနေဖက် သူငယ်ချင်း ဖြစ်သူ […]
“ရမ္မက်ဖြင့် အတိပြီးသော ဘာသာဗေဒ” ( စ/ဆုံး )
” အ. အားးး အီးးး အ အ လှိုင်းတွေလှိုင်းတွေ မူးရိပ်ရိပ် အားးးရှီးးးး ” ဟင်! ငါဘာဖြစ်နေတာလဲ ငါဘယ်ရောက်နေတာလဲ တခါမှ မခံစားဖူးတဲ့အရသာ မျက်လုံးအသာလေးဖွင့်ကြည့်မိတော့ မူးနောက်နောက်နဲ့ အာရုံတွေက လုံးဝစုစည်းမရ – အိုရ် ခန္ဓာကိုယ်မှာ အဝတ်စားမရှိတော့။ နာမည်က– ချစ်မှူးအိမ်စည် အသက် ၂၅နှစ် ( 36-27-40 ) ပုရိသတို့ဖမ်းစားနိုင်သူ ချစ်သူ ထူးဝေသော်နှင့် မကြာခင်လက်ထပ်တော့မှာမို့ သူငယ်ချင်းတွေနဲ့ အကြိုပွဲလေး အပျော်စားပွဲသောက်ပွဲ ကျင်းပရာက အနည်းငယ်မူးလာသဖြင့် သူငယ်ချင်းဖြစ်သူက အိမ်လိုက်ပို့ရင်း အိပ်ပျော်သွားခဲ့ရာမှ ဖြစ်ပျက်ခဲ့သည်။ ဟင်! “ဇော်— နင် – နင် ဘာလုပ်နေတာလဲ ငါ- ငါ့ကို သနားပါဟာ အဟင့် ဟင့် ” […]
Page views today : 3,909
Total visitors : 32,499
Total page view: 115,338